I-50 yeChic yasekhaya yokuHombisa iiMbono-Uyilo olulula lwangaphakathi kunye neengcebiso zokuhombisa ukuzama - Iiprojekthi Ze-Diy
Uyilo lukaHeather Hilliard
Ukuba ikhaya lakho lifanelekile ngenxa yohlaziyo loyilo kodwa une Uqingqo-mali olunqongopheleyo kwaye nexesha elincinci, ukwindawo elungileyo. Sicinga ngemibono engama-50 yokuhombisa ekhaya ukukunceda ukuba uqale. Ngento elula njenge isandi udonga, imibala iglowubhu yokulayita , okanye umqamelo omtsha wokuphosa (okanye amashumi amane anesixhenxe ezinye izimvo zekhaya zokuhombisa ukuba ezo azizukuphakamisa i-alley yakho), indawo yakho yonke inokuziva intsha, kwi-ntsingiselo kodwa ayiphelelwa lixesha, kwaye icokisiwe. Unako ukujongana nayo nganye yezi zimvo zokuhombisa ngosuku olunye, nangona iziphumo ziya kujongeka ngathi zithathe ixesha elide ukuzikhupha.
Jonga igalari Amashumi amahlanuIifoto Uyilo lukaHeidi Caillier 1Ngama-50Cwangcisa indawo eFudumeleyo yokuFunda
Ngaba akukho nook ikhethiweyo yokufunda? Akukho ngxaki. Ukuba ikhaya lakho alinayo indawo eseleyo yokuthengisa izindlu nomhlaba ukuze uguqulwe ube yindawo yokufunda, yila igumbi lakho lokuhlala ngokusemthethweni ukuze wenze umsebenzi ophindwe kabini njengendawo ephucukileyo yokuphumla. Apha, uHeidi Caillier ngobuchule wakhetha ifanitshala enamalaphu kunye neemilo ezintsonkothileyo kunye nekhaya, zilungele ukonwabisa okanye ukuzikhulula ndedwa.
Farrow kunye neBhola MbiniNgama-50Musa Ukoyika Ipeyinti emnyama
Inkqubo ye- umbala wepeyinti omnyama othambileyo Kweli gumbi lokulala lenza ukuba lizive likhethekileyo kwaye lisondele ngeendlela ongasoze ukwazi ukuziphumeza ngombala okhanyayo (lo mthunzi uthile yiFarrow kunye neBhola yoKhenketho). Ifanitshala ye-eclectic iboleka kakuhle ebumnyameni, nayo, isongeza indawo yokuhlala ngakumbi kunye nekhaya lasekhaya.
imihombiso yekrisimesi ebomvu nesilivere
Ukubuyisela iiRolls 3Ngama-50Uhlobo lweNdawo yoMlilo engenanto
Phinda ucinge ngendlela oyicwangcisa ngayo indawo yomlilo engenanto. Kule ndawo ityebileyo, umyili wezinto ezingaphakathi uLeanne Ford wajika indawo engenamlilo engenanto kwigalari encinci ukubonisa ubumba kunye nomsebenzi wobugcisa.
UVictoria Pearson 4Ngama-50Phatha iiWindows zakho
Ukongeza unyango lwefestile elungileyo kunokwenza wonke umahluko. Sikho ngokukodwa kwii-shades zaseRoma kunye nephethini eyonwabisayo. 'Kuyahambelana nokuhombisa i-101, kodwa ukusebenzisa iipateni ezincinci ngokudibeneyo kunokuba lula emehlweni, utshilo umhlobisi wezangaphakathi uKristin Panitch, oyile eli lifu lipinki liphuphileyo lokulala.
UFiona Lynch 5Ngama-50Phinda ubeke isitayile kwithala leencwadi
Ukusuka kwi-inki yebala leenkuni ukuya kwisitulo secala langoku kunye neleli ecocekileyo, ilayibrari yasekhaya eyilwe UFiona Lynch kukuthatha okuhle okwangoku ngoku. Ungayigcwalisa ngeencwadi-okanye ungongeza kwiimpawu zokuhombisa kunye nezixhobo ezinje ngee vases kunye nemifanekiso eqingqiweyo yokuphula isizinzi sedonga leencwadi. Okanye, lungelelanisa umbala neencwadi zakho. Ayizukuziva iyindibaniselwano kuphela, kodwa ukuba unemibala eqaqambileyo kwimqoqo yakho, baya kubonakala ngakumbi.
Igumbi lokuhlala laseFrance
UJohn Gruen 6Ngama-50Cwangcisa i-Nook yesidlo sakusasa
Isidlo sakusasa ngombono? Singene kweli lizwe lilizwe elinobunewunewu kunye nokuthinta nje irustic kodwa lisakhazimlisiwe. Ikwangqina ukuba awudingi ukuba neokok eyakhelwe-ngaphakathi ukufezekisa imeko elungileyo.
UPaul Raeside 7Ngama-50Coca ukungena kwakho
Ukuba awunayo i-foyer enkulu-okanye unayo kodwa ifuna uthando- yazisa ngetafile encinci yekhonsoli. Kwezobugcisa ezisesikweni kodwa zale mihla, khetha itafile yesiko kwaye emva koko uxhome ubugcisa banamhlanje obungasentla. Emva koko yondla eminye imizobo eludongeni ukuze ubuyise umva kudonga lwegalari.
ULeanne Ford Interiors 8Ngama-50Yongeza nje iigusha
Ukuba kukho nayiphi na indawo ekhayeni lakho evakalelwa ngokungathandekiyo, ukuphoswa kwesikhumba segusha sesona sisombululo silula. Bazisa ubushushu, uburhabaxa, kunye nentuthuzelo ngelixa banokufikeleleka ngokulula kwaye kulula ukuhamba kwindawo yakho njengoko iimfuno zakho kunye neemoods ziguquka.
Studio Ashby 9Ngama-50Shintsha iipilisi zakho zokuphonsa
Ukuphosa imithwalo yeyona ndlela ilula yokuhlaziya kwigumbi lokulala okanye kwigumbi lokuhlala. Ukuzisa umbala omtsha, ukuprinta, okanye imilo ngomqamelo wokuphosa kunokwenza indawo yonke izive intsha kwakhona.
UAnnie Schlechter 10Ngama-50Zisa isihlalo kwigumbi lokuhlambela
Slayida isitulo ecaleni kwebhafu. Ayizukunceda kuphela indawo engaphezulu ngombutho, ikwayindlela entle yokwenza indawo yonke izive ilungile.
UPeter Murdock Shumi elinanyeNgama-50Bonisa Igumbi lakho lePowder Uthando oluthile
Kulula ukulijonga igumbi xa lincinci kakhulu, ngakumbi kuba akukho sithuba saneleyo sokuhombisa. Kodwa kunokwenzeka-kwaye kufanelekile-ukubonisa ezi nook ezinye uthando. Thatha eli gumbi lomgubo, umzekelo. Ngokukhanya okukhanyayo okupinki kombala wodonga kunye negalari ejikelezileyo yobugcisa be-eclectic, igumbi elincinci lipakisha iipunch ezininzi.
UFrank omangalisayo 12Ngama-50Faka iCopop
Ukuba ufuna ukuguqula igumbi lakho lokulala libe yibhotwe elilungele ubukhosi, yongeza i-canopy. Eli laphu limhlophe lixhonywe kakuhle kwaye lizisa ukubonwa okuqinisekileyo kwigumbi lokulala elincinci.
UNicole Franzen 13Ngama-50Ukutshintsha iiAccents ngeXesha
Ngaba ucinezelwe? Ebusika? Nokuba sikufuphi nokwaphuka komhlaba, kodwa siselapha ngenxa yayo. Ukutshintshela ii-accents ngexesha lonyaka kuya kukuvuyela ukuba kuza kwenzeka ntoni.
ULeanne Ford Interiors 14Ngama-50Khuthazwa nguNdalo
Esi sithuba sityebile ngokuthungwa, okudala ubushushu kunye nobukhulu. Kukwakho nobuninzi beempawu zokuziphatha nangona unamathele kumbala ongqongqo wombala. Kwimeko efanayo yokumema kunye neyomhlaba, khuthazwa ngendalo. Cinga ngengca yolwandle, irattan, ijute, ukhuni, ikhonkrithi ebrashiweyo, kunye nemabhile.
UNicole Franzen Shumi elinantlanuNgama-50Ukubuyisela kwakhona i-Furinture yakho
Ukuhlaziya ifanitshala yakho kuya kuhlaziya ngokuzenzekelayo indawo yonke. Kwaye ukuba uyakuthanda ukuhombisa kwe-eclectic, thabatha amanqaku kweli gumbi lokuhlala lingathandekiyo. Yonke into exutywe kweli gumbi isebenza kakuhle-isibuko esimnyama, ubugcisa beorenji obucacileyo, indawo yomlilo emarmore, isitulo seRustic, kunye neebumba zejometri zonke zincediswa ngokungalindelekanga kukuthamba kwezitulo ezipinki.
izixhobo zokukhanyisa iitafile zokutyela
UMikayeli Axelsson 16Ngama-50Lungisa ngokulula
Ngokuqinisekileyo ayisiyiyo le nto ufuna ukuyiva kuba asicingi ngokucoceka njengokuzonwabisa, kodwa ukongeza iziqwenga ezimbalwa ezenza umbutho wenze umahluko omkhulu. Cinga ngokufaka iihaki zedyasi okanye ungenise idyasi yedyasi enesitayile ngasemnyango wangaphambili. Emva koko beka isitulo esincinci esisongekileyo phantsi kwaso ukuze uhlale kuso xa ukhulula izihlangu. Oku kuyakuthintela ezo zinxunguphalayo (kwaye ngaphambili bezingenakuthintelwa)
UMFANEKISO: UMateyu Williams; Uyilo: Studio DB 17Ngama-50Umbala-Vimba iWall Wall yakho
Isiteyitimenti somzobo, bamba umbala udonga lwakho. Ipeyinti yesiqingatha sombala onesibindi okanye ukhethe iithowuni ezimbini ezingathathi hlangothi. Apha, umnyama unyuka malunga nekota yendlela ngelixa enye ingumthunzi olungileyo wentsimbi engwevu, esenza ingxelo engaphantsi.
ezona penti zibiza kakhulu kwi-nyc
UAlexander M. Reid 18Ngama-50Chukumisa iindonga
Hlaziya igumbi lokuhlambela ngokunika iindonga ingubo entsha yepeyinti emhlophe. Ukuba oko kuvakala njengokuzibophelela okukhulu, sebenzisa irabha yomlingo ukuchukumisa ii-smudges. Kuyakhanya, kuyahlaziya, kwaye indawo engenanto engenanto kwigalari eyonwabisayo, njengoko kubonisiwe kule ndawo yokuhlambela yenzelwe nguAlexander M. Reid.
UCatherine Kwong 19Ngama-50Faka isicelo sePhepha lodonga
Akunyanzelekanga ukuba uzenzele iphepha lodonga igumbi lakho liphela-khetha udonga kunye nendlela eligxile kuyo. Iyakhawuleza, ilula, kwaye yenza umahluko omkhulu.
UWILLIAM ABRANOWICZ Amashumi amabiniNgama-50Ulwaleko iiragi kunye neepateni
Eli khaya le-eclectic eliyilelwe nguSean Scherer ligugu lobuncwane bezinto zakudala, amalaphu ahlekisayo, kunye nokuhombisa ngokungenaloyiko. Ikwayi-masterclass ekubekeni. Kutheni usebenzisa umbhoxo omnye xa unokuba nesithathu? Umbhoxo wombhoxo ngemibala eyahlukeneyo, ushicilelo, kunye nezinto ezenziweyo ukongeza umdla obonakalayo kumgangatho wakho.
UAnnie Schlechter amashumi amabini ananyeNgama-50Phinda ucinge kwakhona kwiGalari yakho
Ukuba iindonga epasejini ziziva zidiniwe okanye zinqongophele, yongeza udonga lwegalari. Yizisa izakhelo ze-antique, okanye ubethe indawo yokugcina izinto okanye intengiso yentengiso, kwaye ucwangcise itoni yezibuko zezandla kudonga lwegalari.
Umhlaza kaRobson 22Ngama-50Yazisa ngengubo entsha yokuphosa
Ukubeka ingubo yokulahla enemibala ekupheleni kwebhedi yakho okanye ukuphosa phezu kwesofa yinto elula kodwa eguqukayo yoyilo. Ikwayindlela entle yokuzama imibala kunye neeprinta ngaphambi kokuzibophelela ngokupheleleyo kuzo.
UMFANEKISO: Alexandra Rowley; Uyilo: Studio DB 2. 3Ngama-50Khetha ubugcisa beNgxelo
Yenza udonga olulula lube mnandi ngakumbi ngobugcisa obukhulu. Khetha iifoto ezinkulu okanye into engabonakaliyo kunye nephilileyo yokwenza ingxelo.
Studio Ashby 24Ngama-50Faka ukukhanya okutsha
Ukuba kukho nantoni na enokucoca ngesandla esisodwa kwigumbi, yinto elula. Kwimeko efanelekileyo? Isikhanyiso sethuba lobhedu. Iziva ngathi icwenge ngakumbi kwaye inobucukubhede ngaphezu kwesibane setafile kwaye iyahluka ngokuchasene nezinto zemveli kwigumbi lokulala.
Iipeyinti zekhonkrithi zomgangatho
UTomas loof 25Ngama-50Ipeyinta imigangatho yakho
Ngaba unokuyicinga indlela elula ngayo le ndawo yokuhlambela ngaphambi kokuba ibe nomgangatho ohlaza okwesibhakabhaka? Utshintsho olukhawulezileyo luvumela ibhafu ukuba ithathe indawo ephambili. Sifuna ukuntywila apho imini yonke.
Isitudiyo DB 26Ngama-50Beka isibane somgangatho weBold kwikona
Le kwikona incinci intle, inesitayile, kwaye intle ngokugqibeleleyo, enkosi kwilounger yesikhumba yanamhlanje kunye negrafiki yombhoxo. Kodwa eso sibane somgangatho wethayile sisakhiwo sokwakha esizisa ngokwenyani loo nto yongezwa. Khangela isibane somgangatho esiphindwe kabini njengomsebenzi wobugcisa obufanayo.
UCatherine Kwong Uyilo 27Ngama-50Fundisa umahluko
Ukwenza umahluko onomdla, buyisela into enye kwigumbi lendabuko elingenanto kwaphela enje, njengale tafile yekhofi yejometri kunye nomgangatho opeyintwe ngombala.
UNicole Franzen 28Ngama-50Yongeza ibhentshi ekupheleni kwebhedi yakho
Awudingi ibhodi yeenyawo. Ibhentshi iya kufumana umsebenzi ofanayo. Izokunceda ukumisa ibhedi yakho, isebenze njengendawo yokuhlala nokubeka izihlangu, kwaye usebenze njengendawo yokugcina iiphedi neengubo.
UNicole Franzen 29Ngama-50Hlela kwakhona ifenitshala yakho
Ulungelelwaniso, ngubani? Izitulo zakho kunye neesofa akufuneki zilungelelane — enyanisweni, awunyanzelekanga nokuba uzenze unayo izitulo. Beka itafile yakho esecaleni kwikona ejikelezwe ziisofa ezimbini, kwaye ukuba awunazitulo zengalo zaneleyo zokusetwa kwegumbi lokuhlala, vele ubeke indawo yokuhlala phantsi kwitafile yekofu.
ULeanne Ford Interiors 30Ngama-50Yiya encinci
Beka izinto zakho indlela phantsi kwaye igumbi lakho liza kubonakala lihluke ngokupheleleyo. Oku kuphindwe kabini njenge-makeover kunye nokucoca intwasahlobo konke kwenye.
OkulandelayoIikiti ezili-10 ezilula zokudibanisa onokuzithenga kwi-Intanethi Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUHadley Mendelsohn Umhleli oMkhulu UHadley Mendelsohn ngumhleli ophakamileyo weNdlu, kwaye xa engaxakekanga ethathela ingqalelo kuzo zonke izinto ezinxulumene nokuhonjiswa, unokumfumana ethengisa iivenkile zokuvuna, efunda, okanye ekhubeka kuba mhlawumbi waphulukana neiglasi zakhe kwakhona.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
izimvo zesipho seValentine kumfazi
imibono yasekhitshini yokuyila ibha yasekhitshini
ikhitshi elincinci elineekhabhathi ezimhlophe